Zamzam, Waa Astaanteenoo Nafkaliya ah. | Anti-Tribalism
← Khilaaf Soo Kala Dhex Galay Faroole & Saraakiisha Dowlada KMG ah
Hardan loogu jiro cida ku fariisineysa kuraasta Baarlamanka cusub ee Somalia oo taagan magaalada Muqdisho →
Zamzam, Waa Astaanteenoo Nafkaliya ah.
30.07.2012 – Qalbiyada Wadaniyada ee qalalay ayey Qoyneysaa. waa Qaran,waa Qalbi dhisa oo marka ay Ordeysaa uma Tartameyso Nafteedee, Dalkey ku Difaaceysaa, Wadnaheeda Wadaniyadaa dhex Ceegaagto, Calanka korkaa gee ayaa u muuqda, Rajabeel Indhaheedu ma arkaan oo waa Guul sido, Daafaca Sharafta Dalka waa u duuban tahay oo Waa Astaanteenoo Nafkaliya ah.
Zamzam Maxamed Faarax Maalintii dhagaheedu maqleen loona Caleema saaray in ay Dalkeeda u orodo ayey laabteeda burqatay, guuxii wadaniyadeed ee ay lasoo garaadsatay balse u weysay meel iyo madal ay ugu gudbiso shacabkeeda balanbalka ku jira ee Been hawaas iyo Bala abuur shisheeya wata iyo mid silic u dhimay sokeeyaha ay u tashadeen u istaagtay in ay ka buubiso.
Kolka seexa loo kaco mooyee inta kale wuxuu ugu xiran yahay foolka oo wajigeeda wuxuu bixinayaa iney tahay Halyey Xaawo Taako oo Nool oo waxaa dhex qaaday laabteeda macaanka Wadaniyada oo Qabyaalad, Goboleysi iyo Afar iyo Ber ma qaado laabteeda, waxeyna u hamuun qabtaa Jamhuuriyadeeda oo mida lehna Dowlad kaliyana in ay dhex Hurudo.
Markii Halyey Cabdi Bille yiri Calanka qaad waa tii Ilmeysay oo Diiday in Halyeyga wadaniyada ku gaamurtay ee aan 20-kii sano wixii qasjiray qalbi samo iyo duca un uhayey umadiisa Cabdi Bille oo jooga in aysan Calanka Baluugleey qaado balse markii lagu qanciyey sharciyad deg dega oo aysan hore usii sheegin Gudiga Olombikada Soomaaliyeed una xalin waa tii markii ay Calanka qaaday ruuxdeeda oo dhami aysan meeshaba joojin, sacab, damaashaad iyo Maamuus wixii dhacayey uma muuqan iyadu ee niyadeeda waxey soo jirtay Dalkii Hooyo, waxeyna Calanka u siday sidii Askari Wadaniyada dalkeena lagu carbiyoo Haaneedka iyo habka qaadista Calanka Xidiga dalacaad ku helay ama sida Halyeygii Xalane iyo dagaalkii 1964, hadii Zamzam madfac kastaa uu kusoo dhaco masiideyseen Midnimada Gacanteeda ku jirta. qalaama rogadka Boqorada Ingiriiska iyo Jaah ku faankeedii bandhiga waxaa Zamzam ka qarinayey wixii Waalidkeed uga sheekeeyeen ee ah in ay Soomaali laheyd Cudud, Midnimo iyo Kal adeeg taasoo ay hiigsaneyso.
Meelkasta oo ay tagto iyo markastoy la hadleyso umada soomaaliyeed waxey u sheegeysaa in ay guuleysan doonaan iyada iyo Oradyahan Maxamed Xasan, difaacayaana Calanka Soomaaliyeed, waxey leedahay wadankeyga wuu soo laabtay, wadankeyga sidii hore maahan, dalkeyga waa Dalkeyga, anigana cagteydaan ku daafacayaa.
Si kastooy u aragtay dhal dhalaalka Yurub ee ay hore u dhisteen Rag u dhashay, kumey dawaqin Zamzam Maamed Farax oo waa wadnaheedii oo sii adkeystay kuna weynaatay Wadaniyadii, waana tan keentay in ay wadada geeskeeda markii ay soo afrxirantay Xaflad loo sameeyey labadooda Oradyahan inta is heyn weysay ku qaaday Heeskan ay la ilmeeyeen intii daawatay oo ay ku toooseen niyadihii dhintay ee Dal kaquuska joogay.
Kaa Dhoofi maayee, dhan kaloo Qalaad ku han dhaafsan maayee.
Inta aanan Dhiman, ley kaa dhex galinee,
Zamzam Oradyahanad kaliya uma ahan umada soomaaliyeed ee waxey noqoneysaa Astaan dhalinta Colaada ku hanaqaaday iyo dhamaan umada soomaaliyeed ay daba istaagaan qalbiga ay buuxiyeen jaceylka dhulka iyo shacabka, kuna hogaamiso halka midowga iyo wadajirkeena uu ku xasilaayo taasoo ah Calanka Shanta gees ee u xiran Curdunka dheeman ah ee 20 sano kadib usoo dhalatay umadeena kala waaba waabowday ee midkastaa uu Calan siloon iyo caada qaate u kala martiyey.